Al-Shabaab oo gowracday 2 Haween ah Shan kalena rasaas lagu dilay - iftineducation.com
Al-Shabaab oo gowracday 2 Haween ah Shan kalena rasaas lagu dilay
iftineducation.com – Ilaa Todobo Haween ah ayaa lagu dilay degmada Tiyeeglow ee Gobolka Bakool, iyadoo Labo ka mid ah Haweenkaasi ay gowraceen maliishiyo ka tirsan Al-Shabaab.
Falkani oo dhacay saqdii dhexe ee xalay iyo waaberigii saakay , sida uu sheegay Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow Maxamed Cadale Xasan, isagoo tilmaamay in labo ka mid ah haweenka oo ka tirsanaa ciidamada booliska degmada ay gowraceen Al-Shabaab.
“Falkan xalay saqdii dhexe ayuu dhacay labo haween ka tirsan ciidamada booliska ayaa waxaa meel koonaha magaalada ka watay Al-Shabaab, waana gowraceen”ayuu yiri Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow oo wareysi siiyay Idaacada BBC-da.
Sidoo kale Gudoomiyuhu ayaa sheegay in shan kale oo haween ah uu rasaas ku furay nin askari ahaa oo qabay mid ka mid ah labadii haween ee la gowracay, waxaana uu xusay inay baaritaano wadaan.
“Shanta haween kale waxaa baas ku furay mid ka mid ah askarta oo qabay mid ka mid ah labadii gabdhood ee la gowracay, baaritaan ayaana wadnaa”ayuu yiri Gudoomiyaha degmada Tiyeeglow.
Wararka ayaa sheegaya in labadaas haween aar-gudsi ahaan uu u dilay askariga, kadib markii la sheegay inay iyana xiriir la lahaayeen Al-Shabaab.
Degmada Tiyeeglow ayaa waxaa maalin ka hor tababar ciidan loogu soo xiray boqolaal askari oo ay tababareen ciidanka Itoobiya ee AMISOM ka mid ah, waxaana ciidamadaas ka mid ahaa Haween.
Itoobiya oo kordhisay qiimaha ay ku bixiso dal ku-galka dalkeeda